Ebee ka ị na-etinye mpempe akwụkwọ iri maka nrụrụ erectile? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Iri iri na ụma maka mkpali nwoke - ihe ngwọta dị irè
Iri iri na ụma maka mkpali nwoke - ihe ngwọta dị irè
Ebee ka ị na-etinye mpempe akwụkwọ iri maka nrụrụ erectile?
Ebeotu obereelectrodena perineum, ya bụ, akụkụ dị n’etiti etiti na mkpịsị ụkwụ. Otu nnukwuelectroden'elu sacrum, ya bụ, nnukwu, ọkpụkpụ triangular na ntọala nke spain na n'elu coccyx.
> Site na ọgwụ na nfuli ka ịwa ahụ na ebili mmiri na-awụ akpata oyi n'ahụ, enweghị ụkọ ọgwụgwọ, ihe dị oke ọnụ, na mgbagwoju anya maka nrụrụ erectile. Na ndị ọrịa na-achọsi ike inweta ọgwụgwọ yana ndị dọkịta na-agba ọsọ ọgwụ, oke, oke mgbaàmà, mmezi ọsọ ọsọ na-erute mkparịta ụka ọ bụla banyere mgbochi. Akpata ma ọ bụ na-adịgide adịgide ọgwụgwọ.
Mana nlekọta kachasị emetụta onye ọ bụla na azụmaahịa a na-eto eto nke na-eto site n'ịlụso adịghị ike ọgụ bụ na nrụrụ erectile abụghị naanị nchegbu kachasị maka ụmụ nwoke, ọ bụkwa ha kacha egbu egbu. Ndewo Emily nke Bite Size Vegan ma nabata na vegan ọzọ. Erectile adịghị arụ ọrụ abụghị isiokwu nke mkparịta ụka maka nri abalị.
Enweghi ike inwe mmekorita na-ebute otutu nsogbu nke ndi mmadu na ndi mmadu. Na ego nke astronomical of impotence treatment, ọ dị mfe idepụ ED dị ka ED iji ego na-adịghị mma iji mee ihe banyere ọrịa na-eyi ndụ egwu karịa ihe a na-elekarị anya dị ka ego mmadụ na-ekwenye na akụkụ nke abụọ nke usoro ahụ ike mmadụ. ya na Dr. Michael Greger nke Nutritionfacts.org anyị na-anụ eziokwu na-enye nsogbu banyere ọdịdị ndụ egwu nke nrụrụ erectile, ihe kpatara ya, na usoro nri dị mfe dị mfe.
Greger, daalụ ọzọ maka iwepụta oge na oge ọrụ gị iji nọrọ na ọwa wee zaa ajụjụ ole na ole. Dr. Greger: Na obi uto, oge obula! Emily: O bu okwu ekwesighi ikwu na inwe mmeko nwoke na nwoke dikwa mkpa nye otutu umu nwoke.
N'ezie, naanị ọgwụgwọ na-adịghị mma nke erectile anyị ga-anụ bụ banyere ọtụtụ ọgwụ na-efu ihe karịrị $ 1 ​​ijeri kwa afọ n'ụwa nile. Mana anaghị ebute ihe kpatara nsogbu na nsogbu nke nrụrụ erectile. Yabụ kedu ihe ọghọm dị na nrụrụ erectile karịrị ike ọghọm? Dr.
Greger: Erectile na-adịghị arụ ọrụ, akọwapụtara dị ka enweghị ike inwe mmekọahụ na-eju afọ, dị na 100 nde ụmụ mmadụ gburugburu ụwa na nde 30 nde na US. Ha na-ekwu, chere nke abụọ, US nwere naanị 8% nke ndị bi n'ụwa, mana 30% nke adịghị ike anyị bụ # 1, anyị bụ # 1. Ee n'ezie.
Ma onye na-echebara echiche n'ihi na anyị nwere ọgwụ na-acha ọbara ọbara, na-acha ọcha na-acha anụnụ anụnụ dị ka Viagra. Nsogbu a bụ ọgwụ ndị a anaghị edozi ihe kpatara kpatara ọnya, inflamed, akwara dysfunctional. Ya mere nsogbu erectile na ọrịa akwara ọbara bụ n'ezie ngosipụta abụọ nke otu ọrịa ahụ.
Pasent 40 nke ụmụ nwoke karịrị 40; 40 karịrị 40 nwere nrụrụ erectile, nke na-etinye ha ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 50 ugboro ihe ize ndụ nke ịnwụ site na nkụchi obi dịka ọnwụ mberede. Nke ahụ bụ 5,000% mụbara ihe egwu na ọbụlagodi maka ụmụ okorobịa. Anyị na-echebu banyere nrụrụ erectile na ụmụ okorobịa na 20s-30s, ọ bụ ihe niile metụtara mmụọ.
Nke ahụ kwuru, ihe niile dị n'isi ya. Mana ọ tụgharịrị na ọ bụ ihe ịrịba ama izizi nke ọrịa vaskụla. Ya mere, ụmụ nwoke ndị nwere nkwarụ erectile, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha enweghị mgbaàmà obi obi, dị ka mgbu obi, kwesịrị ịtụle ndị ọrịa obi ruo mgbe egosiri na ọ bụghị.
Nke a bụ ihe mere ụmụ okorobịa kwesịrị iji lekọta ogo nke cholesterol ha, dị ka ikwesi akwara ike nwere ike ime ka mpempe akwụkwọ dị nro ọtụtụ iri afọ. Cholesterol gị nwere ike ịkọwa ọrụ mmekọahụ ọtụtụ iri afọ mgbe ọ gasịrị na ndụ n'ime ọmụmụ ihe ndị a. You na-ekwu chere nke abụọ mana ugbu a anyị nwere ọgwụ ọgwụ? Enweghị m ike iri ihe na-enweghị isi na ndụ m niile wee rie mkpụrụ ọgwụ ole na ole.
Mana ị maara Viagra niile? na willWA agaghị enyere gị mmekọahụ ndụ mgbe a ọrịa strok. Isi okwu bụ na 'ED' na-anọchi anya ọnwụ mbụ. Ọ bụ lanarị ike kacha ike.
Emily: Site na nrụrụ erectile nke, dịka i kwuru, bụ ngosipụta nke onye gburu # 1, gịnị kpatara na anaghị agwa ndị mmadụ mgbe ọ bụ iyi egwu ndụ ha? Anụtụbeghị anyị na nrụrụ erectile bụ akụkụ nke ọrịa akwara obi. Dr. Greger: Ọfọn, ha doro anya na ha abụghị ndị debanyere aha Nutritionfacts.org.
Ọ dị mma, ọ dịka ichere obere oge, gịnị kpatara na ndị mmadụ amaghị na enwere ike gbanwee ọrịa obi na nri dị mma? Anyị # 1 egbu. Ọgwụgwọ nke # 1 na-egbu ndị nwoke na ndị nwanyị, anyị amatala na kemgbe July 1990 na Ornish's Life Life Trial bipụtara ọtụtụ iri afọ gara aga. Ma ọtụtụ narị puku mmadụ na-aga n'ihu ịnwụ site na ọrịa a na-egbochi, nke a pụrụ ịgwọta, na nke a na-agbanwe agbanwe.
Ma chere obere oge, ka anyị matara? Nke ahụ bụ n'ihi na a gwaghị ndị dọkịta - anaghị eme ka ndị mmadụ nweta ego - enwere m ike ịgafe ikike niile nọ na Ọrụ, ọkachasị ndị akụ na ụba, ndị anaghị ewepụta ozi a na ọha. Ihe kpatara na ị hụghị broccoli mgbasa ozi na TV bụ otu ihe kpatara na ị naghị anụ maka nyocha a. Enweghị ebumnobi na-emeri.
Onweghi onye na-ezipụ mgbasa ozi mgbe a na-eme ọmụmụ gbasara etu ụtọ poteto si dị gị mma maka na enweghị ebe a na-atọ ụtọ nduku. Enweghị ụzọ isi nweta ozi a. A sị na anyị nwere ụdị akụ nwere ike iwetara gị sayensị nke a na - enweghị azụmaahịa.
Ọ bụ ya mere m ji arụ ọrụ m na-arụ, enwere m olileanya na ị nwere obi ụtọ ịnụ na Dr. Greger ịnụ banyere ezigbo ihe egwu na ngwọta dị mfe nke njikọta arụmọrụ na-arụ ọrụ na-adịghị mma maka ọmụmụ ihe dị mkpa yana weebụsaịtị nke Dr. Greger na blog post maka edemede a. jikọtara na nkọwa dị n'okpuru.
Ọ bụ ezie na ọ bụ isiokwu na-adịghị mma, eziokwu banyere nrụrụ erectile nwere ike ịzọpụta ndụ n'ụzọ nkịtị. Biko kekọrịta edemede a iji nyere ụmụ nwoke aka ka ha jidekwa ahụike ha. Gbalia ịdenye aha na ọwa ka ị ghara ihie ndị ọzọ gbasara usoro Ahụike Ndị Nwoke. Iji kwado usoro ọzụzụ n'efu dị ka nke a, biko lee njikọ nkwado n'okpuru ma ọ bụ pịa akara ngosi Nugget Army ma ọ bụ njikọ dị na sidebar.
Gaa vegan ugbu a, chee aka mgba aka nke eziokwu ma hụ gị n'oge na-adịghị anya. Ma nke kachasi nsogbu niile bụ chi m
Ekwuru m na 'emission' kama 'omission' abụghị nzube nchegbu maka ụmụ nwoke kamakwa onye kacha egbu ha.
M dị ka otu arịlịka akụkọ. Top egbu n'abalị a na 9th. Mmepụta.
Soro na duh nuh nuh
Egwu Intoro! Nke ahụ bụ akụkọ na ụwa m. Ndepụta okwu site na obodo Amara.org
You nwere ike iji otu TENS rụọ akwara?
Kemgbe yana-emeebughi ihe zuruakwaraukwu mkpi,ENMỌ nwere ike'ga-abụejikawuo mọzụlụ. Agbanyeghị, ọgwụgwọ ahụ bara uru n'ịgwọ ihe mgbu, na-ebelataakwaramara aka na ikike ịgwọ ọrịanwere ikenyere aka melite oge ọzụzụ egwuregwu.Ọkt 28 2018
(egwu na-ada ụda) ♪ Bob na Brad ♪♪ Abụọ ndị a ma ama ♪♪ Physiotherapists ♪♪ Na Ntaneti ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - I chere na ị mara mma? - Achọrọ idozi ntutu m. - Anyị bụ ndị ọkachamara na physiotherapists na ịntanetị. - N'echiche anyị n'ezie, Bob. - Taa, anyị ga-ekwu maka ọdịiche dị n’etiti TENS, TENS na akwara akwara.
Ihe a na-akpọkarị EMS. - Chọpụta. - Anyị ga-ekwu maka ya naanị otu nkeji, mana ọ bụrụ na ị bụ ọhụụ na ọwa anyị biko were nke abụọ ịdenye aha.
Anyị na-enye edemede gbasara otu ị ga - esi gbasie ike, dabara adaba na mgbu na - ebugote ha kwa ụbọchị. Ọzọkwa, ị ga-achọ ileta anyị na ntanetị mgbasa ozi anyị ka anyị na-enyefe ihe mgbe niile. Gaa na www.bobandbrad.com ma gaa ebe inye ego.
Ma ọ bụ gaa Facebook, a ga-atụdo ya n'elu peeji ahụ. Anyị na-enyefe igwe TENS n'ezie. N'ezie, ọ bụ igwe TENS na EMS n'otu. - Akwa - nke a sitere na iReliev, ụlọ ọrụ a masịrị anyị n'ezie, anyị ga - ekwu ntakịrị ihe banyere ya ma emechaa. - Chọpụta. - Echere m na anyị na-enye abụọ n'ime ndị a pụọ, Brad.
Ma anyi n’enye ndi ozo, oh, ichoro iwere jeli mgbu? - Ee, ee. - Anyị ga-enyefe ụfọdụ ndị ọgba ọsọ a mgbu gel. Ọ dị mfe itinye, tụgharịa. - Ziri ezi. - Nke a ị nwere ike tụgharịa aka nri na mpaghara mgbu ahụ ọ ga - enyere aka belata ihe mgbu gị. - Ee, ana m eji ya n'onwe m ma ọ bụ ngwaahịa mara mma. - Ebee ka ị na - eji ya? - Naanị n’azụ m.- Oh, ị bụ.
Odi - Tupu m lakpuo ụra - Ma o siri ike iji - Mba, ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ọ bụ ya mere m ji nwee mmasị na ya - Oh, ị mere? Ọ DỊ MMA. Ọ dị mma, ya mere, TENS, na-akpali akpali akwara eletriki transcutaneous.- Ọ bụ aru, Bob.- Ma ọ nwere mkpali ahụ ike eletriki, nke ahụ bụ EMS.- Ee, ụlọ ọrụ ahụike mberede a.- Nke ahụ ziri ezi, nke ahụ bụ ihe ọchị.
Enwere ọtụtụ ihe nwere ike ịpụta ihe abụọ, nri? Azịza ya dị nkenke bụ, ha abụọ na-eji mkpali eletrik - nke doro anya - ị maara, ha ejiri eriri na mpe mpe akwa - nri - na obere obere nkeji. Dị ka m kwuru na mbụ, nke a bụ abụọ. Mana TENS bụkarị ihe nhụjuanya mgbu - aka nri, aka nri - na EMS bụ isi maka uto ahụ ike ma ọ bụ ịmaliteghachi akwara ma ọ bụ nkwonkwo - ọ na - amalite mkparịta ụka mgbe ị na - eji ya, nke, na TENS ọ na - eme mgbe ụfọdụ, mana ọ bụghị ihe mgbaru ọsọ. - Ọ bụghị ihe mgbaru ọsọ, nri.
Yabụ, dịka m kwuru, ọfụma ọtụtụ ngwaọrụ nwere ma, ọzọ ọkacha mmasị anyị TENS na ngwaọrụ EMS bụ iReliev na ihe mere m ji nwee mmasị na ụlọ ọrụ a bụ n'ihi na otu ha dị ka ọ wuru nke ọma ma dịkwa mfe iji. -Nri, ziri ezi.- Yabụ, ihe a masịrị m.
Nke ahụ bụ 80-80, 80-80 Ndo.- Nke ahụ bụ ihe nlereanya nu mber.- Ee, ma ọ nwere TENS na EMS ma ị nwere ike ịgbanwee n'etiti abụọ.- Right.- Ma m ka m ga gbanye ya ebe a otu mgbe ma olile anya na ọ na-arụ ọrụ, enwetara m ya na EMS Ọfụma, akwara ọkụ eletrik, anaghị m eme nke ahụ, ọ na-emere m ya, oh! - Ma inwere ike idozi ike - Ee - O nwere ya nke ka elu, ọ dabere n’ihe ebum n’obi ya bụ, mana ikekwe ị gaghị eme nke ahụ, ị ​​maara, na ọ na-eme ya iji gosipụta ya - ee, iji gosi ihe ngosi dị egwu, nri? - Nri.
Ihe kpatara Bob kwuru na ya nwere olile anya na ọ naghị arụ ọrụ abụghị otu - - Ọ bụ n'ihi m - Ee. (ma chuckle) - A ga - edozi ya - Ugbu a enwere ndị ikuku - Nke ahụ dị mma - yabụ ị nwere ebe a. - Ma EMS ma ọ bụ TENS nwekwara nke ahụ. - Nke ahụ ziri ezi, nke ahụ bụ n’ezie ha kacha mma ahịa.
Chọrọ ịgbanye ya maka anyị, Brad? - Doro anya. Ya mere, nke a bụ njikwa ị nwere ike itinye nke ahụ n'akpa gị ma ọ bụ ihe ọ bụla. Na m nwere --- Yeah, ọ bụghị ọbụna on ma, ma m ga-agbanye ya (mumbles) .- have ga-ejide ya a bit .A-acha anụnụ anụnụ ìhè ga-abịa. - Agaghị m eso ha egwu egwu ugbu a, mana otu a ka ha siri bata ebe a ka ị wee hụ na ịgaghị echegbu onwe gị maka eriri.
Site n'ụzọ, nke a bụ igwe okwu igwe okwu. Nke ahụ abụghị waya maka --- ị dị mma --- Yabụ, TENS, kedu ihe ọ na-eme? Yabụ ị nwere mkpali eletrikiiki nke na - egbochi akara mgbu ka ọ ghara iru ụbụrụ - Aka nri - Ya mere, ị nwere ihe mgbu na ogwe aka gị, ịchọrọ iwepụ ụzọ mgbu a ka ọ ghara iru ụbụrụ, ị naghị enwe ihe mgbu ma ọlị - Right.- M na-ekwu na ọ bụ ya --- nke a bụ ụdị dị mfe ya.- Ọ bụ eziokwu, anyị agaghị abanye na teknụzụ injinia na-ee, n'ezie ọ bụ n'ezie ụzọ ahụ iji kpalie irighiri akwara nke na-ebelata akwara ndị ka ibu. - Ọ dị mma, ị ga-achọrịrị bọọdụ bọọdụ na ọkara awa iji banye. - Mana ọ nwekwara ike kpalite mmepụta nke endorphins eke, ị maara, ụdị ndị opiates gị dị egwu. - Ooh, okwu mara mma, Bob - Ee Ya mere, echiche niile bụ na ọ bụrụ na ị nọ na opioids ị nwere ike iwepu ha.
Nri, aka nri. Ma ọmarịcha ya bụ na ị nwere ike nweta igwe TENS gị ozugbo ị chọtara ya ebe ọ ga-edozi ya ma ọ na - arụ ọrụ gị nke ọma, hapụ ya ka ọ gbaa ọkara ọkara, nkeji iri atọ ruo elekere, wee tụgharịa ọ na-apụ na ọ na-aga n'ihu ndị endorfin ndị ahụ. ezi ihe. na, ị maara gị, nke ahụ nwere ike ịbụ, ị na-etinye ya n'akpa gị ma ọ gaghị apụta ìhè, ị maara na ị na-eyi otu .- Right.- Enwere m ike iyi ogologo aka ma ọ bụ ihe ọ bụla.- Karịsịa na nke ikuku , ị maara gị, ịnwere ike itinye ya n'akpa gị.
Enwere m ihe dị jụụ --- ee, o nwere eriri tụgharịa h, eriri tụgharịa. Ha dị ezigbo mma, enwere m ike itinye ihe igwe m n'okpuru, mgbe m na-agba ọsọ, tinye obere akpa gị ebe ahụ - Ọ bụ ezigbo eriri na-agba ọsọ - Ọ dị mma maka ihe ndị dị n'èzí, Achọrọ m ya n'ezie - Nke ahụ EMS setịpụrụ m ugbu a nwere EMS na TENS, mana ị ga-akpali mọzụlụ iji kwee ma ọ ga - enyere aka iwusi ike nwayọ nwayọ, ọkachasị mgbe ịwachara ahụ. - Chọpụta, ziri ezi - Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-anwa iwusi quad gị ike.
Ọ dịkwa mma ịbawanye ọbara na mpaghara ahụ.- Aka nri.- Nke ahụ na-enyere aka n'ịgwọ ọrịa.- Ama m na m gụrụ otu ihe, enweghị m, emebeghị m ya, ekwuola m maka ya. n'ihi na iji ya eme ihe mgbe emechara –Nri ziri ezi, mgbake.- Usoro mgbake maka akwara gị.
Yabụ ị gaghị enweta ahụ mgbu ma ọ ga - eme ka ọbara gị na - aga. - Ndị astronauts ga-eji ya, ị maara nke ahụ? - Oh, nke ahụ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya - Ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya, ee, ma amaara m na mmadụ chọrọ n'ezie iziga anyị ihe a, ha chọrọ iji ya mgbe ọrịa strok n'ihi na a sublux ubu.- Ee. - Ha nwere obere ngwaọrụ ha na-eji oge niile echere m. - Chọpụta. - Yabụ, ọ na - enyere aka belata mkpụkọ ọbara.
Nwere ike itinye ya ebe ahụ, anyị nwere otu ebe ahụ, ị ​​chetara nke ahụ? kpalie akwara --- Oh nke ahụ bụ eziokwu.- workrụ ọrụ na ụda ahụ, yabụ enwere nnukwu ego ma ọ bụrụ na ị nye njikọ dị n'okpuru.- Sure.- Mana n'ezie ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwale ụdị dị iche, nke a dị gị elu .-Nri.- Anyị chọrọ ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ha abụọ.- Yabụ n'ozuzu igwe TENS abụghị ihe ị ga - azụ ma yikwasị ma mara etu esi eji ya, ị ga - anọnyere gị obere oge ga-elele anya ederede banyere otu esi eji ha eme ihe nke ọma - ee, ha nwere nnukwu ederede na ntuziaka dị ukwuu banyere otu esi eme ihe ndị a niile - ọ bụ ezie na enwere ụfọdụ ndị dịka ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbapụta, ị gaghị eji ya. - ee Enwere ịdọ aka na ntị na ị gaghị enwe ike iji ụfọdụ ihe, dịka ọmụmaatụ mgbe ị dị ime, ị chọghị itinye ya na afọ gị na ndị dị otú a. - nke ọma ka ị hụ na ị mere obere ihe omume ụlọ akwụkwọ tupu iji otu - Nri, kelee onye ọ bụla maka ikiri.
Nwere ike TENS bụrụ ihe na-emerụ ahụ?
IHEa na-ahuta ya ka odi mma. Mana o nwere nsogbu dị ka usoro ọgwụgwọ ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ọkụ eletrik dị oke oke ma ọ bụ etinye electrodes na akụkụ na-ezighi ezi nke ahụ, nke anwere ikegbaa ma ọ bụ mee ka akpụkpọ ahụ gbarụọ. 'Mpaghara ihe egwu' gụnyere ụbụrụ, obi, anya, akụkụ ahụ nwoke, na akpịrị.
Bob na Brad ♪♪ Physiotherapists abụọ a kacha mara amara ♪♪ Na Ntaneti ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Anyị bụ ndị ọkachamara n'ihe banyere ahụike nke ịntanetị - N'echiche anyị, n'ezie, Bob. - Taa ihe anyị ga - ekwu maka ya, TENS adịghị mma? Onwere onye nwere ike iji ya? Anyị ga-ekwu maka ịdọ aka na ntị. Ọ ga - abụ ezigbo akụkọ akọrọ, Brad. (Brad na-achị ọchị) Mana maka ndị na-achọghị ile ya anya, n'agbanyeghị, anyị ga-enwe mbipụta ya, yabụ na anyị enweghị ike ị toa anyị ntị, ọ bụrụ na ịchọghị ya nwere ike gaa weebụsaịtị anyị wee gaa PDF, enwere okwu ga-eso isiokwu a.
Gaa na Bob na Brad, gaa na ngalaba Mmemme wee chọọ isiokwu TENS. Aga m ahụ nke a, dị TENS dị mma, onye ọ bụla nwere ike iji ya, ịdọ aka na ntị, nlezianya. Ma ọ ga - enwe ndepụta a dum nke anyị na-agabiga. - All right- - Ya mere, IZI, oh, gaa n'ihu. - Naanị m chọrọ ikwu, tupu anyị abanye na ndepụta ahụ, echere m na dabere na ahụmịhe m, Bob ga-ekwenye, 95% nke ndị mụ na ha rụkọrọ ọrụ dị mma n'iji ya.
Enwere ihe ole na ole nwere ike ịdabara gị, ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ otu n'ime ha mgbe ahụ ị bụghị nwa akwukwo, mana-- - Ee, kwere m, ha niile na-anwa ikpuchi ịnyịnya ibu ha ebe a. (ọchị) I maara, na nke a (Brad na-achị ọchị) n'ihi na ọtụtụ n'ime ndị a abụghị nsogbu maka ọtụtụ mmadụ. Ya mere, ọ dị mma iji maka ọtụtụ ndị mmadụ.
Ha anaghị enwekarị mmetụta ọ bụla. Mmetụta dị egwu dị obere. Enwere ndị nwere ike ịnwe nfụkasị na mpempe akwụkwọ mmachi ma nwee mgbasasị anụ ahụ, mana m ji teepu ahụ nke ahụ.
Ma ị ga-agbanye na pad hypoallergenic. Mgbaze eletriki sitere na igwe TENS na-akpata ụfụ, ihe na-emetụ n'ahụ, ihe na-emetụ n'ahụ, ụfọdụ ndị nwere ike ịchọta nke a. - Nri. - Ma ugbu a na Brad ga-ekwu maka ịdọ aka na ntị ahụ, gịnị kpatara na ị gaghị abanye, Brad? Achọrọ m ịwụpụ ma kpọọ otu n'ime ha, mana ọ bụ otu n'ime ndị mbụ ị ga-ekwu. - Gaa dọkịta gị, nri.
O doro anya na ị tụrụ anya na anyị ga-ekwu ya. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eji otu ihe ọzọ ihe mgbu ahụ agaghịkwa akawanye mma, ma ọ bụ na ị nweghị uru ọ bụla bara uru, hụ dọkịta gị ọzọ. - Eeh, ọ bụrụ n ’ihe mgbu gị na-aga n’ihu, ọ kwụsịghị na ị hụbeghị dọkịta gbasara ya, mgbe ahụ ị ga-ahụ ya. - Aka nri, aka nri.
Ejila mkpali ma ọ bụ pad n'elu olu gị, ọ dị mma? - Anyị na-anwa ịgafe akwara carotid ebe ahụ. - nwere ike ọgbaghara gị ụda n’ebe ahụ. - Ee, e nwere okwu gbasara akwara na-ebute nsogbu iku ume.
Ejila ihe mkpali obi mee n'ihi nsogbu obi nwere ike ime. Emela ihe mkpali gafee ọnya na-emeghe. Won't gaghị etinye ya na anụ ahụ na-adịghị mma.
Y’oburu n’icho ihe ojoo, oghe oghe, ma obu ihe obula n’adighi nma, adi nma, igaghi eji ya. Ọ bụrụ na ị meela agadi ma nwee akpụkpọ ahụ na-emebi emebi, ị bụghị nwa akwukwo. Y’oburu n’ichoro obere mgbahu na akpukpo aru gi, i bughi onye ndoro-ndoro ochichi - o kwuru ntutu? Maka na n’ozuzu ị chọghị ị nweta ntutu n’ezie ebe ọ bụla.
Want chọrọ-- - Ọ bụghị ya? Ihe niile na-afụ ụfụ, ọ na-afụ ụfụ naanị mgbe ị (chịrị ọchị) wepụ pad ahụ. Yabụ, ọ dị mma ịkpụcha akpụkpọ ahụ na - - Otu ntutu isi dị mma, - ntutu isi.- Mana ọ ga-adọka.- Ee, ọ naghị eme ezigbo mmekọrịta ahụ, yabụ ọ nwere ike ịka mma. - Chọpụta. - Etinyela aka ebe enwere ọnya kansa.
Know mara, nke ahụ nwekwara nsogbu nwere, kwa. Emela ihe mkpali n'elu bat, ma ọ bụ mgbe ị na-asa ahụ ma ọ bụ ịsa ahụ. - Ọ dị mma, mba - - Mba mmiri - ee, ị gaghị ewere nke a na mmiri. (Brad na-achị ọchị) Echere m na ekwesịrị ịsị Brad n'ihi na ụfọdụ ndị chere na ọ nwere ike ịbụ mmiri na-enweghị mmiri, ọ ga-enyekwa gị ihe mkpali eletrik dị mma ma ọ bụrụ na i mee - nke ahụ dịkwa mma.
Ejila mkpali mee ihe mgbe ị na-ehi ụra. Definitelychọghị ihe ahụ. - Ọtụtụ ndị mmadụ ga-ajụ nke ahụ, Brad. - Ee, nke ahụ bụ eziokwu. - Ọ bụ ezigbo ajụjụ n'ihi na ị na-enwe ihe mgbu n'abalị ma eleghị anya ịchọrọ ịnwa ịrahụ ụra na ya ma anyị achọghị ya - Etinyela mkpali mgbe ị na-anya ụgbọ ala, akụrụngwa na-arụ ọrụ, ma ọ bụ na-arụ ọrụ.
Ihe ndị a niile nwere ike ịkpata nsogbu. Kpọtụrụ dọkịta gị ọzọ ma ọ bụrụ na ị jiri ngwaọrụ a. O nwere ike ibute arrhythmias na-egbu egbu na ndị nwere ike ibute.
Yabụ ọ bụrụ na inweela nsogbu obi, ọ dịbeghị mgbe m ji ya na onye ọ bụla nwere ọnọdụ obi na ọ bụ nsogbu - nke ọma, ọ bụ pacemaker, ị chọghị itinye ya na ụdị nyocha obi ọ bụla ma ọ bụ sistemụ pacemaker. - Nri. - Na na na, m ga-ịbanye na Brad? - Chọpụta. - Ya mere, ihe ndị a bụ akpachapụghị anya, ha adịghị oke egwu dịka ịdọ aka na ntị, mana ọ baghị uru na isi ọwụwa n'ozuzu ha, ma ha achọghị ka ị tinye n'akụkụ ọ bụla nke isi gị.
Ha na-ekwu na ọ nweghị uru ọgwụgwọ, ekwetaghị m. Mgbe ịmalite ibugharị na mpaghara TENS, ihe mgbu gị nwere ike ịgwọ ngwa ngwa. - Chọpụta.
Nri, n'ihi mmegharị mmegharị. - Mmeghari ahụ, n’aka nri. Otutu n'ime ndia adighi nma.
Emebeghi nchekwa nke mkpali eletrik n'oge afọ ime. Yabụ, achọghị m ime ya ma ọ bụrụ na ị dị ime. Anyị na - ekwu na ị ga - ezere ya - ee - anyị kwuru maka mgbakasị anụ ahụ ekwugoro.
n'ụlọ mgbatị mgbatị
Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa obi, gbaa mbọ hụ na dọkịta gị maara. Anọgidela na-eme nke a, dịka ọmụmaatụ mgbe emerụrụ gị ma ọ bụ mgbaji ọkpụkpụ. Gaa dọkịta gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji nke a mgbe ịwachara ahụ. n'ihi na ọ nwere ike imetụta nsonaazụ ịwa ahụ n'ezie.
Debe ngwaọrụ a ka ụmụaka ghara iru ya. Chọghị iji ya na anụ ahụ enweghị mmetụta ọ gwụla ma inwere onye maara ihe ha na-eme gị. Echere m na nke ahụ bụ banyere ya, Brad, ihe ọ bụla ọzọ anyị kwuwororịrị ya mere amaara m na ọ bụ isiokwu akpọnwụ ọzọ, mana anyị chọrọ ọtụtụ gị.
Ọ bụrụ n ’ị na-eche ịzụrụ otu anyị achọghị ka ị dị ka gụọ akwụkwọ mgbakwunye agbakwunyere - Aka nri, daalụ - Daalụ. (Ọyụ music)
Ndi otu TENS nwere ike iju gi anya?
Nwere ikeEnwetara mkụjara? IheTENS unitna-enye ọgwụgwọ ahụike nke ọkụ eletrik na ahụ gị. Nke ka elugịgbanwee ya, ka mmetụta ahụ ga-adịwanye njọ ma nwekwuo ụfụ mgbugịga-enweta. Tụgharị ya elu dịka ọ ga-aga nwere ike ibuteihe ijuanyana nkasi obi, ma ọ gaghị emerụ ahụgị.
Ọtụtụ iri na-akpali ọbara ọgbụgba?
Mmetụta analgesic nwere ike ịbụ nsonaazụ nke arụmọrụ ọmịiko, nke na-ebute vasodilation ma belata ihe mgbu (43). Ya mere, ọ na-atụ aro naTENS na-eme ka ọbara gbasaa, si otúna-akpali akpaliịgwọ ọnya dị iche iche.
Kedu ihe dị iche n'etiti iri na EMS?
Isiihe dị iche
Ọdụdọ Ngwunye Ọdụdọ Na-agbanwe agbanwe (IHE) Igwe na - akpali irighiri akwara naanị maka iji belata ihe mgbu, ebe Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu (EMS) a na-emepụta igwe iji kpalite akwara maka ebumnuche nke iwusi ha ike na imezi ha.
Ndi otu TENS nwere ike inyere cellulite aka?
Igwe ọkụ eletrik na-akpali akpali dị kaTENS nkejiejirila oge ụfọdụ gwọọcellulite. Ndị na-akpali akpali na-eji ụzọ dị ugbu a agbaji anụ ahụ dị n'okpuru anụ ahụ, yana mkpụrụ ndụ abụba na akpa mmiri. Ifelatanwere ike inyere akabelata oke nke abụba abụba, nke ga-ewepu dimples.
Ndi otu TENS nwere ike inyere aka na abuba?
Nwere ikeAna m ere ọkụAbụbaNaIHE? Ihe omumu a gosiputara naENMỌ nwere iken'ezie ọkụabụbama belata mgbatị n'úkwù. Dịka anyị kwuru, ọ naghị ebute “mbelata ntụpọ” ma ọ bụ gbaa ọtụtụ calorie ara ara, mana ọ bụna-emegbaa ụfọdụ calorie ume ma na-akpali ahụ ịmalite ịmalite imebiabụbasel!Mar 4 2021
Ntọala TENS ọ nwere ike ịkwụsị obi gị?
Igwe igwe TENS, transcutaneous electronic nerve stimulator yiri acupuncture, ọ bụ ezie na mgbakwunye na ọ na-enye ike eletrik na-agbanwe agbanwe n'etiti isi abụọ iji gbochie ihe mgbu dịka ị na-enweta site na sciatica.Iheugbu a dị oke ntakịrị ma ọ ga-abụ na ọ ga-egbochi yaobirhythms.10.12.2014
Kedu onye na-ejighi otu TENS?
Enwere ụfọdụ ndịndị na-ekwesịghị iji TENS. Ha gụnyere ụmụ nwanyị dị ime (n'ihi na ọ nwere ike ibute ọrụ aka akaghi aka) na onye ọ bụla nwere ihe nkpuchi ma ọ bụ ihe ọzọ ejiri akụ.16.10.2019
Kedu ka esi eji TENS kpalite lactation?
Iji TENS Unit mee ihe iji kpalie mmamịrị. TENS na-anọchi anya Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, a na-ejikarị ya iji kpalie irighiri akwara na akwara iji belata ihe mgbu. Ngalaba TENS bụ ngwaọrụ nke na-emepụta ike eletrik dị ala nke na-esite n'otu electrode gaa na electrode nke otu ọwa ahụ.
Kedu ka esi eji nkeji TENS agwọ ọrịa?
A na-ejikarị usoro mgbatị ahụ mgbu na ọgwụgwọ anụ ahụ. Otu ebumnuche kachasị na ọgwụgwọ anụ ahụ bụ ịnwe usoro dị iche iche na-adịghị emerụ ahụ. Mpaghara ihe mkpali akwara eletrik (TENS) bụ ihe nchịkwa na-ewu ewu. Site na otu TENS, a na-etinye mpempe akwụkwọ abụọ n'akụkụ akụkụ ahụ gị metụtara.
Kedu ka esi eji electrodes agwọ ọrịa iri?
Mpaghara ihe mkpali akwara eletrik (TENS) bụ ihe nchịkwa na-ewu ewu. Site na otu TENS, a na-etinye mpempe akwụkwọ abụọ n'akụkụ akụkụ ahụ gị metụtara. Mgbe arụ ọrụ, unit ahụ na-ewepụta mgbaàmà eletrik. Ọ na - akpali ahụ gị ka ị hapụ ọgwụ kemịkal opioid nke ya.